Purchaser | Myint Myat Kyaw Group of Company Limited. ﻿
10.7.2020, Full time , Trading
•	အသက် (၃၀) ဝန်းကျင်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Procurement / Logistics Knowledge ရှိရမည်။
•	Purchasing လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Advance Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။
•	Age Between - 25 to 30
Work location Lower Pazaungdaung,Pazaungdaung Tsp;Yangon.
Job posted: 10/7/2020
267 Days, Full time , Trading
268 Days, Full time , Trading
Internet Audit Incharge
269 Days, Full time , Trading
•	RC Work & Steel Design (Overall Drawing,Detail Drawing ) ရေးဆွဲနိူင်ရမည်။ •	Architectural Drawing (Exterior & Interior Deaign including Rendering) ဆွဲနိူင်ရမည်။
•	Operation ပိုင်း Technical ပိုင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရမည်။ •	Engineering Management ပိုင်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ရမည်။ •	သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများသို့ ဝင်ထွက်သွားလာ၍ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေအောင် � ...
•	အသက် (၃၀) နှင့် အထက်ဖြစ်ပြီး Contractor များ၏ အရည်အသွေးပေါ်တွင် စီစစ်ကြီးကြပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Estimated တွက်ချက်နိုင်သူ၊ လုပ်ငန်း Schedule အတိုင်း အောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသက် (၃၀) နှင့် အထက်ဖြစ်� ...
•	Audit Plan များ ရေးဆွဲ ပြီး အကောင်အထည် ဖော်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ စက်ရုံ၊ ဆိုဒ်များသို့ သွားရောက် စစ်ဆေးနိူင်သူဖြစ်ရမည်။ •	Accounting Standards နှင့် International Financial Reporting Standards(IFRS) များနားလည်ရမည်။
•	အသက် (၃၀) ဝန်းကျင်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ •	Procurement / Logistics Knowledge ရှိရမည်။
Purchaser Purchasing/Material Management Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Myint Myat Kyaw Group of Company Limited. Purchasing/Material Management Jobs Purchasing/Material Management Jobs Trading Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Assistant Local Purchaser (Code-38628)